hutano - ALinks
Rondedzero yezvipatara muUSA
January 17, 2022 Demi utano, USA
Iyo US hutano hutano maitiro uye akanakisa evakarapa akawanikwa ari mamwe eakanakisa uye makuru munyika. Sekutaura kwemushumo iyo USA hutano hwekuchengetedza hutano hwave nenzvimbo makumi matatu nematatu munyika Iyo USA haina kutevera a
Rondedzero yezvipatara muTurkey
January 17, 2022 Shubham Sharma utano, Teki
Chero ani anoziva kuti hutano hwakakosha. Izvo zvakave zvakanyanya zvakanyanya kuti uzvitarisire iwe paunenge uchitama kubva kune imwe nyika uchienda kune imwe nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye nenzvimbo. Zvino, kuuya turkey
January 10, 2022 Shubham Sharma utano, Netharenzi
Iyo Netherlands ine yakanakisa ekuchengetedza hutano mabasa kune vagari vayo. Zvese zviri pamutemo nezvehutano nezvevanhu vese zvinowanikwa munyika. Ruzhinji hutano hwehutano munyika inowanikwa zvakasununguka kana pamutengo wakaderera kwazvo kuvagari vayo. Ruzhinji
Ko hutano hunoshanda sei muSwitzerland? Zvipatara zvakanakisa zveSwitzerland
January 8, 2022 Shubham Sharma utano, Siwizarendi
January 8, 2022 Demi Kanadha, utano
Canada ine zvipatara zvakanaka, kunyanya muMontreal neToronto. Zvakare, Zvipatara muCanada dzimwe nguva zvinogona kushanda nehutano hwekutarisira kugadzwa kwekugadzwa Maiwe, mune dzinenge dzese nyaya maapplication anoda nhamba yekuzivikanwa yeCanada. Zvipatara zvakanakisa muCanada ndizvo: Toronto General
Zvakadii zvipatara muRussia, gwara rinokurumidza kuzvipatara zveRussia
January 8, 2022 Demi utano, Rashiya
Chekutanga pane zvese, muRussia, unogona kufonera 103 kuti uwane chinongedzo chakanangana neamburenzi yechimbichimbi yezvokurapa. Vese vanoshanda vanotaura chiRussian uye zvakare vanofanirwa kukwanisa kutaura Chirungu, bata mutauri wechiRussia akakukomberedza kana uri kunetseka
Rondedzero yezvipatara zvakanaka muFrance
January 6, 2022 Shubham Sharma Furanzi, utano
Kune chirevo chine mukurumbira chaizvo "Zvipatara zvakanzwa minamato mizhinji". Zvipatara ndiyo inzvimbo yehutano yekurapa murwere kubva kuzvirwere zvakati. French Hutano hutano uye zvekurapa zvivakwa ndeimwe yeakanakisa pasirese.